Noocyo Cherry ah | February 2020
Noocyo Cherry ah ee koox dhexe
Furitaanka xagaaga xilliga xagaaga ee xilliga xagaaga waxa ay ku bilaabmaysaa qamiis cajiib ah oo macaan. Waxaa la rumaysan yahay in cherry macaanku yahay warshad kuleyl ah oo jecel in koraayo oo keliya gobollada koonfureed. Waqtigu wuu dhaafaa, saynisku weli ma istaagi karo. Thanks to shaqeyn la'aanta ah ee jilayaasha, quruxda koonfureed ee koonfurta ayaa muddo dheer degay meelahayaga.
Noocyada ugu delicious ee cherry macaan
Buuryada Cherry ma shaqeeyaan ma aha oo kaliya shaqeyn miro, laakiin sidoo kale mid ka mid ah heesthetic ah. Geedahan xooggan oo leh qurux-xiiran leh, caleenta cagaaran ee dhalaalaya oo aad u qurux badan ayaa qorraxda ku qurux badan, indhahana waxay ku farxaan indhaha kala duwan ee midhaha kala duwan oo ka soo jeeda dahab dahabi ah ilaa maroon, ku dhowaad madow. Malaha ma aha beerta beerta oo dhan inay ogtahay in quruxda koonfureed ee soo gaartay Europe horay u jirtay.
Wadanka yaanyada cherry waxaa loo arkaa in uu yahay Koonfurta Ameerika, ama halkii, dalka Peru. Ereyga cherry waa tarjumaadda ereyga Ingiriisiga cherry, taas oo macnaheedu yahay "cherry". Yaanyadaas si buuxda u caddayn magaca, maadaama ay ka yar yihiin noocyada caadiga ah ee yaanyada. Yaanyadaasi waxay u muuqdaan kuwo soo jiidasho leh waxayna hore u yaqaaneen bannaanka u.
Winter-Hardy iyo miro: sharaxaad iyo dabeecadaha noocyo cherry macaan "Fatezh"
Mararka qaarkood dhab ahaantii ma doonaysid inaad iibsato jeeriga (gawska shimbiraha) ee suuqa, sababtoo ah qofna ma garanayo halka uu ku yaal iyo hoosta shuruudahan middani koray. Sidaa darteed, bannaanka u badan ayaa raadinaya noocyo noocan oo kale ah jeeriga, taas oo siin kara goosashada wanaagsan ee gobolka Moscow iyo gobollada kale ee dhexe iyo waqooyi-galbeed. Kalluumaysatadu waxay xannaaneeyeen arrintan, iyo dhowaanahan dhowaan noocyo kala duwan oo geedkan ah ayaa la jaray - Cinjirka Fatezh.
Cherry Sweets "Ovstuzhenka": dabeecadaha, pollinators, sirta ah beerashada guuleysta
Cherry Sweet "Ovstuzhenka" waa noocyo caan ah oo caan ah. Sharaxaadi maaha mid aan kala go 'lahayn, sida geedku leeyahay dhalid wanaagsan, dulqaad lehow cimilada qabow iyo dhadhankiisa aad u fiican. Taariikhda taranka "Ovchuzhenka" waa noocyo hore oo hore ah ee cherry macaan, oo leh miraha wakhti caadi ah Biyaha.
Chermashna Cherry: dabeecadaha, khibradda iyo xayawaanka
Maanta, dadka jecel in casaan casiir ah oo buluug ah iyo buluug-guduud ah ay ku raaxaysan karaan dhadhanka aan la ilaawi karin ee ay la socdaan - miro guduud ah. Waxaa jira noocyo farabadan oo ah geedka jaalaha ah, sidaa darteed waxaan tixgelin doonaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan - Chermashna cherry macaan. Ka fikir sifooyinka ugu muhiimsan ee kala duwan ee macmacaanka, iyo sidoo kale ogaado sida this cherry macaan u suurtagashay in ay ku guuleystaan ​​meesha ay bannaanka u khibrad leh.
Cherry "Julia": dabeecadaha, khibradda iyo ixtiraamka
Cherry Sweet "Julia" waa geed dhaadheer oo dheer oo leh miro soo jiidasho leh oo dhadhan fiican leh, waa mid aad u caan ah beeralayda gobollada waqooyiga iyo gobolka Black Earth. Xulashada Yulia cultivar waxaa laga helay xarunta tijaabada ah ee beerka ee Rossosh (Voronezh) laga bilaabo miraha beerta cas Gin ee degaanka ka dib pollinal leh geedka jaalaha ah ee Denissen.
Cherry Sweet waa mid ka mid ah berry xagaaga ugu horreeya ee muddo dheer sugayay ka dib jiilaalka. Laakiin ma aha in dhammaan gobollada ay midho wanaagsan si wanaagsan u miro. Sidaa darteed, waa inaad si gaar ah u fiirisaa noocyo jiilaalka-adag oo ka mid ah this berry. Mid ka mid ah wakiilada noocyada this waa Valery Chkalov, cherry macaan. Taariikhda xulashada Cherries "Valery Chkalov" waxaa lagu soocay habka xulashada xorta ah ee toddobaadyadii qarnigii labaatanaad.
Cherry Sweet "Pearl Pink": sifooyinka, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Cherry Sweet waa isku dhafka isku dhafan ee isku dhafan, kaas oo ka kooban dhammaan walxaha lagama maarmaanka ah iyo xeryaha nafaqada ee muhimka ah. Qaar badan oo naga mid ah waxay ku raaxeeyeen berrito iyada oo farxad gaar ah leh, sida miraha ma aha oo kaliya caafimaad leh, laakiin sidoo kale cajiib ah dhadhan. Doorashada casriga ah waxay fursad u heshay in ay ku koraan jeeriga ee labada koonfureed iyo latitudes, taas oo si fiican u siiyay by kala duwan ee "Pink Pearl".
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyo Cherry ah 2020